Daawo Sawirro: Wasiir katirsan Dowlada Turkiga oo xoog looga saaray dalka Holand iyo Rabshado ka dhashay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Wasiir katirsan Dowlada Turkiga oo xoog looga saaray dalka Holand iyo Rabshado ka dhashay!!
Daawo Sawirro: Wasiir katirsan Dowlada Turkiga oo xoog looga saaray dalka Holand iyo Rabshado ka dhashay!!
Waxaa sii xumaanaya xiriirka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeyay Dowladaha Turkiga iyo Holand, waxaana hada khilaafka u dhaxeeya labadaasi dowladood uu marayaa meel aad u xun .
Dowlada Holand ayaa shalay u diiday Wasiirka Arimaha dibada Turkiga Mevlut Cavusoglu in uu dalkaasi diyaarad ku soo galo kana qeyb galo isku soo bax , waxa ayna arintaasi si weyn uga careesiisay dowlada Turkiga.
Khilaafka ayaa sii xoogeestay kadib markii Dowlada Holand mar kale dalkeeda xooga uga saartay Wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga Fatma Betul Sayan Kaya, wasiirada ayaana safar dhinaca dhulka ah uga soo gashay Jarmalka waxa ayna dooneysay in ay ka hadashao Banaanbax Erdogan lagu taageerayo oo ka dhici lahaa magalaada Rotterdam.
Ciidamada booliiska Holand ayaa xoog ku kala eryay taageerayaasha Madaxweyne Erdogan oo isugu soo baxay Qunsuliyada Turkiga ku leehayay magaalada Rotterdam, waxaana halkaasi ka dhacay rabshado u dhaxeeyya booliiska iyo dibad baxayaasha.
Wasiirada Arimaha Qoyska Turkiga ayaa ujeedka ay u tagtay Holand lagu sheegay mid ay ku dooneysay in ay taageero ugu hesho dadka asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga oo la doonayo in ay u codeeyaan afti dhawaan la qaadayo si awood dheeraad ah loo siiyo Madaxweyne Erdogan.
Booliiska dalka Holand ayaa si qasab ah dalkaas uga saaray Wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga Fatma Betul Sayan Kaya, waxaana wasiirada la geeyay xaduuda dalka Jarmalka oo aheed halkii markii hore kasoo gashay, wasiirada ayaana markii dambe u duushay dalkeeda.
Dowlada Holand ayaa sheegtay in aysan marnaba raali ka aheyn in banaan baxyo dalkeeda ka dhigaan dadka asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga, waxa ayna dowladu sheegtay in banaan baxyadaasi xiisad ka abuuri karaan dalkeeda oo dhawana doorasho ay ka dhaceyso.
Ra’isul Wasaaraha dalka Holand ayaa sheegay in ay adkaatay in xal laga gaaro murankaasi diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya dalkiisa iyo Turkiga, waxa uuna mas’uuliyad xummo ku tilmaamay booqashada wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga.
Waxaa hadalkaasi isna si adag uga jawaabay Ra’isul Wasaraha dalka Turkiga Binali Yildirim waxa uuna sheegay in Turkigu uu ka aargoosan doono dowlada Holannd oo uu sheegay in ay ku kacday dhaqan aan la aqbali karin.
Madaxweynaha Shacbiyada badan leh ee dalka Turkiga Erdogan oo ka hadlay Xiisada u dhaxeysa Holand iyo Turkiga ayaa ku tilmaamay xukuumadda dalkaasi “haraadigii Naasiyiinta” waxa uuna wax laga xumaado ku tilmaamay in ay is hortaageen in Wasiirka arimaha dibada dalkaasi tago.
Waxaa sidoo kale sii xumaanaya xiriirkii dowlada Turkiga la laheed wadamo kale oo kuyaala Qaarada Yurub , waxaana wadamadaasi ay iyana diideen in dalalkooda lagu qabto banaan baxyo taageero loogu raadinayo aftida dhawaan ka dhaceysa Turkiga.
Previous PostFadeexad: Gadoodkii Ciidamada Milateriga oo sabab u ahaa mushraadkooda oo meelo kale loo wareejiyay!! Next PostWaddamo Europe Ka Tirsan oo Diiday in Shacabka Turkiga isku-soobax Sameeyaan iyo Sababta ka dambeysa!